सुशान्तको नि*धनको खबर सुनेर ५ वर्षका उनका भान्जाले जे भने… सबैको बोली बन्द ! – Butwal Sandesh
सुशान्तको नि*धनको खबर सुनेर ५ वर्षका उनका भान्जाले जे भने… सबैको बोली बन्द !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको नि*धनको खबरले अहिले बलिउड गहिरो शो*कमा छ । सुशान्तको नि*धनको खबरले उनका ५ वर्षका भान्जाले देखाएको प्रतिक्रिया यतिबेला भा*इरल बनिरहेको छ । सुशान्तकी बहिनी श्वेता सिंह किर्तिले आफ्ना छोराको प्रतिक्रिया सामाजिक संजालमा सेयर गरेपछी अहिले उक्त भिडियो भा*इरल बनिरहेको छ ।
लामो समयदेखि डि*प्रेसनसँग जुधिरहेका सुशान्तको नि*धनको खबर जब कृतिले आफ्ना छोरालाई सुनाइन् त्यसको लगत्तै अमेरिकामा बस्ने उनका ५ वर्षका भान्जा निर्वाणले आफ्नी आमालाई भने ‘तर उहाँ तपाइको मनमा जीवित हुनुहुन्छ´ । उनले यो वाक्य पटक पटक भनेका थिए ।
श्वेताले सुशान्तका सबै फ्यानहरुलाई धैर्यधारण गर्न आग्रह गर्दै उनको आत्मालाई दुख पुग्ने कुनै पनि काम नगर्न भनेकी छिन् । जब ५ वर्षको बच्चा यसरी कुरा गर्न सक्छ भने सोच्नुहोस् हामी सबै कति दह्रो हुनुवर्छ । सबै बलियो रहनस् । खास गरी सुशान्तका फ्यान । कृपया बुझिदिनुस् उनी हाम्रो मनमा रहन्छन् र सधैं रहनेछन् ।
सुशान्त सिंह राजपूतले डि*प्रेसनका कारण ज्या*न फ्यालेको कुराले भारतीय मिडिया केहि दिन देखि तात्तिएको छ । क्यारियरको उच्च सफलता हासिल गरिरहेका सुशान्तलाई किन डि*प्रेसन भयो भन्ने धेरै कुराहरु बाहिरिरहेको छ । यहि क्रममा अहिले सुशान्तलाई बलिउडका टप ७ निर्माताहरुले आफ्नो चलचित्रमा नखेलाउने भनेर घोषणा समेत गरेको खुलेको छ र यी ७ मध्य सलमान खान र कारण जोहर समेत रहेको रिपोर्ट आएको छ ।
भारतीय मिडियामा आएको रिपोर्ट अनुसार ७ निर्माताहरुले सुशान्त सिंहलाई आफ्नो चलचित्रमा नखेलाउने भन्दै हिंडेका थिए जुन कुरा सुशान्त सम्मले थाहा पाएका थिए । यो घ*टना करिब ६ महिना अघिको हो र यहि कारणले सुशान्त डि*प्रेसनमा पुगेको बताईएको छ । ७ निर्माताहरु संग सुशान्त सिंह राजपूतको सफलतालाई अघि बढ्न नदिन आफ्नो चलचित्रमा नखेलाउने र अरुलाई समेत सुशान्तसंग काम नगर्न आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ । सुशान्तले सानो समयमा ठुलो सफलता हासिल गरेका थिए र यसैका कारण सुशान्तलाई अघि बढ्न नदिन ग्रुपिजम चलेको र यो बारे थाहा पाए संगै सुशान्त डि*प्रेसनमा पुगेको रिपोर्ट आएको छ ।
७ निर्माताहरुमा सलमान खानको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ । सलमान खानले आफ्नो चलचित्रमा सुशान्तलाई नखेलाउने भनेर उल्लेख गरेका छन् । सलमान संगै कारण जोहरले समेत अब देखि सुशान्तलाई चलचित्रमा नखेलाउने भनेका छन् । करण जोहरले सुशान्तलाई लिएर ड्राइभ भन्ने चलचित्र बनाए तर सुशान्त संग रि*साएपछि उक्त चलचित्रलाई हलमा रिलिज नगरेर नेट फ्लिक्समा रिलिज गरिदिए जसले सुशान्तको क्यारियरमा केहि ध*क्का लागेको थियो । त्यस्तै साजिद नाडीवाड्वालाले समेत सुशान्तलाई लिएर अब देखि चलचित्र नबनाउने बताएका थिए ।
आदित्य चोपराले समेत सुशान्तलाई आफ्नो ब्यानरबाट बन्ने चलचित्रमा सामिल नगराउने निधो गरेका छन् । आदित्य चोपराको कनटृयाक्टका कारण सुशान्तले केहि राम्रो चलचित्रहरु गुमाउनु समेत परेको थियो । त्यस्तै एकता कपूरले समेत सुशान्तसंग रि*साएको र आगामी दिनमा सुशान्तसंग कुनै किसिमको काम नगर्ने बताएकी छिन । भुषण कुमार र दिनेश भिजनले समेत सुशान्तसंग कुनै किसिमको काम नगर्ने बताएका थिए । सुशान्तको सफलता देखेर बलिउडमा धेरै ज*लेका थिए र यसै कारण उनलाई राम्रो ब्यानरमा काम गर्न नदिन खेल खेलिएको उल्लेख गरिएको छ ।